​राजदूत मार्नेको खुल्यो रहस्य « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७५, आईतवार ०८:५३
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ नपर्दा आलोचित भइरहेको प्रहरीले त्यस्तै जटिल एउटा हत्या प्रकरणका कसुरदारको भने पहिचान गरिसकेको छ ।
त्यसो त प्रहरीले झाको हत्यामा पत्नी ज्ञानुमाथि पनि शंका नगरेको होइन । तर, अभियोग प्रमाणित हुने कुनै आधार फेला नपरेपछि उनी निर्दोष रहेको ठहर भएको थियो । शंका गर्नुपर्ने एउटै आधार हो घटना भएको रात उनी पहिलो तलामा सुतेकी थिइन् । प्रहरीअनुमान थियो, कतै हत्यारा ज्ञानु सुतेकै ठाउँबाट त छिरेन ? किनभने, उनी सुतेको कोठाको जालीयुक्त झ्यालमा अलिकति प्वाल देखिन्छ । शंका थियो, कतै त्यही प्वालबाट हात छिराएर चुक्कुल त खोलिएन ? तर, यी शंकाहरू निवारण भइसकेको प्रहरीको दावी छ । पूर्वराजदूत झाकी छोरी राजश्री पहिल्यैदेखि विदेशमा रहँदै आएकी छन् । सँगै बस्ने छोरा–बुहारी उनी मारिनु अघिल्लो दिन विदेश हिँडेका थिए ।